Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqanaya Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya | Baydhabo Online
Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqanaya Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa la filayaa maanta markii ugu horeysay inuu Booqasho ku tago Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku jiraan Kumanaan ruux oo Somaliyed.
Xasan Sheekh Maxamuud oo Safarkiisa dalka Kenya qaadan doono muddo labo cisho ah, ayaa ugu horeyn wuxuu tagayaa Xeryaha Dhadhaab ee dalkaasi, kadibna wuxuu u sii gudbayaa Magaalada Nairobi oo uu kula kulmi doona Madaxda Kenya.
Safiirka Dowladda Somaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan, ayaa Idaacada BBC, wuxuu u sheegay Madaxweyne Xasan inuu noqon doono Madaxweynihii ugu horeeyay Taariiqda Somaliya ee Dhadhaab booqda.
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa booqashadiisa Dhadhaab la filayaa inuu la kulmo hogaamiyayaasha Qaxootiga iyo Hay’adaha Xeryaha ka howlgala.
“Safarka Madaxweynaha waxa uu ku saabsan yahay Koow Madaxweynaha Dhadhaab ayuu imaanayaa, waa markii ugu horeysay oo Madaxweyne Somaliyed uu soo booqdo Qaxooti Somaliyed oo tiradooda intaasi la eeg tahay oo Dibada ku nool kadib dhadhaab markii uu tago oo xaalada uu ogaado, kadib ayuu Nairobi u soo gudbi doonaa oo halkaasi wada hadalo rasmi ah kula yeelan doonaa Madaxda Kenya, maalinta talaadada ah, kadibna dalka ayuu ku noqon doonaa.” Ayuu yiri Safiir Jamaal
Dhadhaab waxaa ku jira Qaxooti ay Somalida ugu badan yihiin, kuwaas oo halkaa ku sugnaa in kabadan 25 sano oo Somaliya colaado sokeeye ay ka socdeen.
Booqashada Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta ku tagaayo Xeryaha Dhadhaab ayaa ku soo aadeysa, xilli Dowladda Kenya ay sheegtay in guud ahaan albaabada ay u laabayso Xeryahaasi.